Nepali Articles » Blog Archive » Dr. Govinda Raj Bhattarai – Bayantari Ma Ek Sunaulo Sanjh
Dr. Govinda Raj Bhattarai – Bayantari Ma Ek Sunaulo Sanjh
डा. गोविन्दराज भट्टराई – बायाँटारीमा एक सुनौलो साँझ
बायाँटारी बजार, ससानो केही घर बाटैको डिलमा, धेरै तलदेखि उठेर त्यहाँ अनुहारमात्र देखाइरहेका । ससानो बजारमा चियापसल, खिर्चीमिर्ची, सलाई साबुन । बजारका बीचबाट ओरालो झर्ने एउटा गोरेटाका मुखैमा उभिएर हेरेँ- पाखामा पनि केही घर उभिएका छन्, सिधै तल पुगेर पाखो टुङ्िगन्छ अनि एउटा खेत सुरु हुन्छ- सम्म छ खोलाखेत । त्यसैको डिलमा फेरि आँधिखोला बगिरहेको छ । बीचैमा झोलुङ्गे साँघु वारि र पारिका ससाना गाउँहरू अनि सेतो बगर । त्यही गोरेटो पक्रेर पाखैपाखा ढुङ्गे सिँढी टेक्तै हामी ओरालियौँ । अलि तल्तिर पुगेपछि अघि लागेका लेखनाथ टक्क अडिए र उनको दाहिनेतिर डिलैमा उम्रेर ठूलो उभिएको एउटा बोट देखाउँदै भने ‘यो मेरी आमाले रोपेको पारिजातको बोट ।’ मैले हेरेँ- माघको महिनामा पारिजातका आधि पात फुस्रिन थालेका छन्, आधिमात्र हरिया । यो फुलेको बेला यसका ससाना थुँगा यही ढुङ्गे सिँढीमा खस्ता हुन्, मैले कल्पना गरेँ । ससाना पहेँलो टीका गरेको फूली रातभरि फुल्छ, मगमगाउँछ अनि बिहान हर्ेदा सबै झरिसकेको हुन्छ । तर पारिजात फुल्ने समय आउन अझै कति बाँकी थियो । ‘मेरी आमाले रोपेको पारिजातको बोट’ । त्यता औल्याउँदै उनी भावुक भए- ‘यहीँ मेरी आमाको निधन भयो, यहीँ मेरा बुवाको पनि । यही घडेरीमा । आज यहाँ घर छैन तर त्यसबेला हाम्रो घर यहीँ थियो । म अलिअलि सम्झन्छु मेरी आमाका अन्तिम दिनहरू, बुवाका अन्तिम दिनहरू ।त्यहाँ एउटा घडेरी मात्र थियो, एउटा घर र आँगनलाई पुग्ने बाँझो ठाउँ, बुढो भएर ढल्किएको पारिजात । दन्त्यकथाजस्तो लाग्ने कुरा । एउटा धूमिल अतीतलाई मनमा उतार्न खोज्दै लेखनाथ मेरा छेउमा उभिएका थिए । उनका आँखा रसिला थिए । उनले भने, ‘सरले पनि यो सानामा खेलेको मेरो सम्झनाको आँगनमा पाइला राखिदिनु हुन्छ कि-’ म रोकिन सकिनँ र घडेरीमा चढेँ, एकसर्को घुमेँ । आँगनभरि मर्न लागेको झार मात्र थियो । यो एउटा पोल्ने र झस्काउने अतीत थियो । लेखनाथ रातोदिन त्यही घडेरीमा पुग्दा हुन् । बर्षवर्षत्यहाँदेखि हजारौँ कोश टाढा बसे, पढे लेखे र आज यो राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्ने भए तर उनले फेरि सुनाए- मेरो मन यो घडेरीभन्दा टाढा कतै पुग्न सकेको छैन, एकदिन म यहीँ एउटा घर उभ्याउने छु । म सानै थिएँ, ती दिन अलिअलि सम्झिन्छु । तर धमिलो छायाँ जस्तो मात्र ।
गोरेटोले हामीलाई त्यो आँगनको एक छेउमा पुर्यायो । हाम्रा सामू ससाना नानीहरूका लागि बनेका होचा डेस्क-बेन्च थिए, सेटसेटै जोडिएका फलामको फ्रेममा काठ ठोकिएका । तिनै बेन्चीहरूमा एक हूल मानिस बसिरहेका थिए । ती हाम्रै प्रतीक्षामा थिए । कोही ता आँगनमा उभिएका पनि थिए- तिनीहरूका हातमा बगमबेली र हरिया पातका मालाहरू थिए थालीमा ससाना गुच्छाहरू । यसो माथि आँखा उठाएर हेरेँ- ‘भूपू सैनिक शान्तिप्रिय एकेडेमी’ लेखिएको थियो । भित्री गाउँमा पनि आफ्ना नानीहरूलाई एकेडेमीमा पढाउने तीब्र इच्छा लिएर सगौरब उभिएका थिए । एकेडेमीमा पढ्ने नानीहरू हरिया ड्रेसमा वरिपरि जिज्ञासाले उभिएका थिए । ती घरका भुइँतला जति सबै कक्षाकोठा थिए, माथ्लो तलामा घरवालाकै आवास ! कस्तो संस्कृति बढिरहेछ, कसरी एकेडेमी प्रेम बढिरहेछ !
आँधीखोला किनारमा आज एउटा साहित्यिक कार्यक्रम थियो । साँस्कृतिक पनि । हामीसँगै ‘आँधीखोला साहित्य सदन’का प्रेमराज लुइँटेल र रामजी लम्साल थिए । डा. बालमुकुन्द भण्डारी, लेखनाथशर्मा पाठक र अरु स्थानीय साहित्यकार थिए । वालिङदेखिका साहित्यकारहरू यो ससानो बायाँटारीमा एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम मनाउन भेला भएका थिए । कस्तो अनौठो र विचित्रताको अनुभूति भयो । धेरै माथि एउटा नाङ्गो भीर थियो, आँधीखोला पारिपट्ट एउटा बस्तीमा टाँसिएर पहाड उभिएको । हामी बसेको आँगनबाट कतै केही देखिँदैन । तर एउटा माइक थियो, भिडियो खिच्ने र तस्वीरवाला थिए । घाम ढल्केर ओझेल पर्ने बेलामा ससाना नानी च्यापेका आमाहरू, खेतबाट आएका पुरुषहरू, बजारबाट झरेका अरूहरू । त्यो उपस्थितिमा साहित्यक कार्यक्रम सुरु भएको कुरा गरे अर्जुन गैरेले । ‘गर्नु गर्यौ बलराम भैँसी पालेर’ का रचनाकार गैरे । सुन्दर खाइलाग्दा युवक देख्न पाइयो । एक जना भूतपूर्व सैनिकजस्ता चिटिक्क परेका कृष्णबहादुर थापा सभापति भएर बसे ।
मैले हेरेँ दाहिनेतिरको अल्गो पाखा उजाड थियो, रूखहरू सिलिङबिलिङ, डाँडाको बीचैबाट चिरेर सेतो पटुकाजस्तो बाटो कुनै गाउँतिर उकालिन्थ्यो । त्यो मोटर ट्रयाक धुलाम्मे देखिन्थ्यो, प्रकृतिमाथि मानिसको यस्तो आक्रमण देखेर उनीहरूको मन शायद ‘प्रकृति बचाउ’ तिर थियो । यो स्वतस्फुर्त आवाजमा पर्यावरणीय सचेतना थियो । नेपाली साहित्यले आफैँ यो मानवेतर लेखनको दिशा पक्रेको थियो, मानिस प्रकृति लेखनतिर फर्किन थालेका थिए । त्यसपछि गायत्री लम्साल, सागर खनाल, पिपला गैरे, लीलाबल्लभ पाठक, अग्निकुमार पल्लव आदिले रचनाहरू सुनाए । गायत्रीको रचना शक्तिशाली थियो ।
posted under Govinda Raj Bhattarai